လုပ်ငန်းစဉ် - Beijing Infinite Vision Technology Co, Ltd.
အဆင့် 1. Brainstorming Draft
ပြိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် စိတ်ကူးဒီဇိုင်းပရောဂျက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အမြင်မူကြမ်းကို ပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရ၊ သင့်အား ပုံတစ်ပုံချင်းစီ၏ နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ထောင့်၊ လေသံ၊ အလင်းနှင့် အရိပ်နှင့် လေထု၏ စိတ်ကူးကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ပိုကြာသော ပရောဂျက်များအတွက်သာ သင့်လျော်သည်၊ မဟုတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျော်သွားပါမည်။
အဆင့် 2. 3D မော်ဒယ်လ်
မော်ဒယ်လ်အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ သင်ပေးထားသော အချက်အလက်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးပြီး သင်ရွေးချယ်ရန် ရှုထောင့်များစွာကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။မူကြမ်းများကို ပေးပို့ပြီး တည်ဆောက်ပုံများ၊ အဆစ်များ၊ မျက်နှာစာပစ္စည်းများ၊ ရှုထောင့်၊ hardscape စသည်တို့ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ မော်ဒယ်များနှင့် အမြင်ထောင့်များ အားလုံး မှန်ကန်သည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ဒီဇိုင်းတွင် ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများအရ အပိုအခကြေးငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
Postwork တွင် Retoucher မြင့်မားသောပုံများကို တင်ဆက်ခြင်း၊ Photoshop တွင် ပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်း၊ လမ်းများ၊ လမ်းဘေးများ၊ လူများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသော သစ်ပင်များ၊ ကားများ၊ ကောင်းကင်၊ အလင်းရောင်၊ အပြင်ဘက်ဆက်တင်များ၊ လှုပ်ရှားမှုများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် သင့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုများကို မကျေနပ်မချင်း ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ .ကျွန်ုပ်တို့၏ရေစာမပါသော 4K (အတွင်းပိုင်းမြင်ကွင်း) သို့မဟုတ် 5K (အပြင်ပိုင်းမြင်ကွင်း) ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတွင် သင်သည် နောက်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ပုံ/s ကို ရရှိသင့်သည်။
အဆင့် 1. 3D မော်ဒယ်လ်
ပထမအဆင့်မှာ ပရိဘောဂများ၏ 3D မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးပြီး သင်ပေးထားသည့် အချက်အလက်အပေါ်အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောနေရာများတွင် ထားခြင်းဖြင့် နေရာလွတ်များကို စုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ယေဘူယျ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည် အာကာသကို နားလည်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။သင့်ဖောက်သည်သည် ၎င်းတို့၏နေရာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအလင်းရောင်တွင်ပြသရန် အကောင်းဆုံးကင်မရာထောင့်များကို ရှာဖွေရန်လည်း ကူညီပေးပါသည်။မော်ဒယ်များနှင့် အမြင်ထောင့်များ မရောက်မချင်း ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်သည်။
အဆင့် 2. ပစ္စည်းများနှင့် အကြမ်းထည်များ
ရှုထောင့်ကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် မော်ဒယ်အတွက် ကနဦးပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ပုံတွင် အရောင်များနှင့် အရာဝတ္ထုများကို အသုံးချရန် ရှေ့ဆက်သွားပါမည်။ဤအချိန်တွင်၊ သင့်ပရောဂျက်အတွက် သင်၏ ကနဦးအရောင်နှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါသည်။ဤအချက်အပေါ် သင်လုံးဝသေချာမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဤအဆင့်အတွက် ထပ်မံ၍ မူကြမ်းများကို ထပ်မံဖော်ပြပေးပါသည်။ပထမမူကြမ်းကို သင်၏ကနဦးအရောင်များနှင့် ပစ္စည်းများမှတဆင့် ပေးပို့သည်၊ ထိုနေရာမှ သင်ဤသို့ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး နောက်ထပ်မူကြမ်းများကို ပေးပို့ပါသည်။သင်၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုများကို သင်ကျေနပ်သည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်သည်။
အဆင့် 3။ အလင်းရောင်၊ တင်ဆက်ခြင်းနှင့် ပို့စဝေါ်
အရောင်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ရှုထောင့်နှင့် မော်ဒယ်များကို အပြည့်အဝအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် သင့်ပရောဂျက်၏ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အလင်းအမှောင်၊ စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် ထပ်လောင်းထည့်သွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရှေ့ဆက်သွားပါမည်။သင်၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုများကို သင်ကျေနပ်သည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်သည်။
အဆင့် 4။ နောက်ဆုံးပေးပို့မှု
သင်သည် 4K/5K resolution ဖြင့် အပြီးသတ်ရုပ်ပုံ/s ကို ရရှိသင့်သည်။အထက်ဖော်ပြပါပုံသည် ပြီးပြည့်စုံသော နောက်ဆုံးတင်ဆက်မှုတစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့် 1. Storyboard/Camera လမ်းကြောင်း
ဤသည်မှာ သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ကို တင်ပြရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရှာဖွေသည့် အကြီးစားပရောဂျက်များအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သော အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုနောက်ကွယ်ရှိ ပင်မ အယူအဆ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါသည်။သဘောတရားကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေးဆွဲထားသော storyboards သို့မဟုတ် photo collages ကို အသုံးပြုပါသည်။အချိန်၊ ဇာတ်ကောင်၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ကင်မရာများ၊ ဇာတ်ကြောင်းအကြောင်း အခြေခံနားလည်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြည့်ရှုသူများ၏စိတ်ကိုဖမ်းစားရန်၊ စိတ်ခံစားမှုများနှင့် လေထုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ဤအဆင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးကိုတင်ပြရန် အကူအညီဖြစ်စေသော ရုပ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုအကိုးအကားများကို စုဆောင်းပါသည်။
အဆင့် 2. 3D မော်ဒယ်လ် အဆင့်နှင့် ကင်မရာ တပ်ဆင်မှု
aပရောဂျက်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အတွက် CAD အစီအစဉ်များ၊ အပိုင်းများစသည်တို့ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ခ3D မော်ဒယ်များ ဖန်တီးပါ။
ဂ။3D ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။
ငအပိုဆောင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှုအသေးစိတ်များကို ဖန်တီးပါ။
fclients မှပေးသော Animation Sequence အရ ဖန်တီးရမည့် ကင်မရာအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ဆကင်မရာများကို ဖန်တီးပြီး သတ်မှတ်ပါ။
ဇကာတွန်းဇာတ်ညွှန်းအတွက် ကင်မရာ ကာတွန်းရုပ်ပုံလွှာနှင့် လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပါ။
ငါကင်မရာတစ်ခုစီတွင် ရိုက်ချက်များ၏ အချိန်ဇယားနှင့် ကြာချိန်များကို သတ်မှတ်ပါ။
ကာတွန်းရုပ်ပုံသည် တကယ်ကို ပုံကြမ်းဆွဲထားသောကြောင့် ၎င်းကို စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းချက်များဖြင့် တွဲဖက်ထားသည်။
အဆင့် 3။ သော့ဘောင်များ (အဝတ်အစား၊ အလင်းရောင်၊ မြင်ကွင်းများ စသည်ဖြင့်)
aပတ်ဝန်းကျင်၊ အဆောက်အအုံများ၊ အပြင်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်မော်ဒယ်များ၏ အရောင်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ခပတ်ဝန်းကျင်ကို အသွေးအရောင်နှင့် 3D မော်ဒယ်များ
ဂ။အပြင်ပိုင်း နေ့မုဒ် အလင်းရောင် စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း။
ဃအတွင်းခန်းမုဒ် အလင်းရောင် စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း။
ပြီးမြောက်မှု သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းနမူနာများက အရာများကို အရှိန်မြှင့်ရန် များစွာ ကူညီပေးပါမည်။မြင်ကွင်းများတွင် အသီးအရွက်များနှင့် လှပသောအသေးစိတ်အချက်များ ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။
အဆင့် 4။ 3D ပုံဖော်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုဂရပ်ဖစ်များ (အပြိုင်လုပ်ဆောင်စရာများ)
aပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် ကုန်ကြမ်း 3D အထွက်ဒေတာကို ဖန်တီးပါ။
အဆင့် 5. လွန်-ထုတ်လုပ်မှု
a3D ဒေတာbကို ပေါင်းစပ်ပါ။နောက်ခံတေးဂီတနှင့် နောက်ခံရမှတ် c။အထူးသက်ရောက်မှုဃ။ပတ်ဝန်းကျင် e.ကာတွန်း f။အညွှန်း gအကူးအပြောင်းများ ဇ.တည်းဖြတ်ခြင်း။
အဆင့် 6. ပို့ဆောင်ခြင်း။
လိုအပ်သော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအပေါ် နောက်ဆုံးဗီဒီယို။8-bit/16-bit အရောင်။MP4 သို့မဟုတ် MOV ဖော်မတ်။
စီးပွားဖြစ် လက်လီလက်လီအတွင်းခန်းဒီဇိုင်း တင်ဆက်ခြင်း။ အတွင်းခန်း 3d Rendering ဝန်ဆောင်မှုများ Rendering Engine Architecture Virtual Architect ဂိမ်း ဗိသုကာ အတွင်းခန်း Render ၃ ထပ် လူနေ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း။